निदाईरहेका यी ७ प्राणीलाई कहिल्यै उठाउनु हुँदैन, यस्तो छ अनौठो कारण ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/निदाईरहेका यी ७ प्राणीलाई कहिल्यै उठाउनु हुँदैन, यस्तो छ अनौठो कारण ?
काठमाडौं । यस धर्तिमा अनेकौं जीव जनावरको बसोबास रहेको छ । हरेक प्राणिको आ–आफ्नै अस्तित्व रहेको छ । त्यस्ता प्राणी को रहन सहन र खान पान पनि फरक हुने गर्छ । कतिपय त्यस्ता प्राणिहरु छन जसलाई सुति रहेको बेला हामिले ब्युझाउनु हुदैन । त्यस्तै सात प्राणिको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं ।
सर्प, राजा, बाघ, अरिंगाल, बालक, पराईको कुकुर र मुर्ख निदाएका छन् भने यिनलाई कहिल्यै उठाउने प्रयास नगर्नु नै उचित हुने गर्छ । तर विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भोकले व्यकुल, भयग्रस्त व्यक्ति, भण्डारे र द्वारपाल निदाएका छन् भने यिनलाई उठाई दिनुपर्छ । यिनिहरुलाई उठाउदा धर्मा प्राप्त हुने बिश्वास गरिन्छ ।
चाणक्य भन्छन्, संसारमा सबै कुरा जो समस्या बनेर खडा भएको हुन्छ त्यसको समस्याको समाधान पनि छ । त्यसको औषधि छ । तर मुर्खता निर्मूल पार्ने कुनै औषधि नै छैन । मुर्ख र काँडाबाट टाढा रहने दुईवटा मात्र उपाय छन्, जुत्ताले मुख फोर्नु र टाढैबाट त्याग गरिदिनु । यस्तै मुर्ख मानिसहरु देखि टाढा नै रहनु उचित हुने गर्छ । मान्छेको जात जस्तो देखिए पनि मानिस पनि दुई खुट्टटे प्राणी हो । मानिस पनि पशु नै हो । एजेन्सी